Apple iyo Prepear Reach Heshiis ku saabsan Astaanta Calaamadaha Pear-qaabeeya | Waxaan ka socdaa mac
Muddo ka hor sidaas ayaannu kuu sheegnay Apple waxay dacweysay shirkad lagu magacaabo Prepear maxaa yeelay astaantoodu waxay aad ula mid ahayd shirkadda. Weligaa ma maqashay muujinta: waxay u egtahay pear tufaax ah? Waa hagaag taasi waa xaqiiqda. Prepear waxay leedahay astaan ​​ahaan pear iyo Apple tufaax ah. Dhibaatadu kuma xirna qaabka astaanta laakiin waa sida loo sameeyay. Xaqiiqdu waxay tahay in labada shirkadoodba heshiis ka gaareen dacwada.
Apple waxay ku fakartay oo aysan khalad ku qiimayn karin wararka heshiiska, in astaanta shirkada Prepear ay aad ugu egtahay tufaaxa, xitaa haduu yahay pear, maxaa yeelay sida ugu yar ee loo sameeyo, khadadka la isticmaalo iyo kuwa kale u malayn karaa inay tahay nuqul. Kadib dacwadaha iyo cadeynta maxkamadaha horteeda, waxaad moodaa in labada shirkadood ay heshiis gaareen. Waxay doorteen inay isku dayaan inay ku xalliyaan maxkamadda dibaddeeda waxaadna moodaa in arintu shaqeysay. Heshiiskaasi waa mid waxtar u leh labada dhinac iyo Uma baahna allabari labada shirkadood ee waaweyn midkoodna.
Apple waxay u oggolaan doontaa shirkadda pear inay sii wadato adeegsiga astaanteeda illaa iyo inta ay isbeddel ku sameyneyso. Isbeddel aad u khiyaano badan. Dukumiintiyo cusub oo laga xareeyay Qeybta Patent-ka iyo Astaamaha Ganacsiga ayaa muujinaya in Apple ay horay u ogolaatay heshiiska, kaasoo markii dambe uu xaqiijiyay wada-aasaasaha Prepear Russ Monson. Wuxuu cadeeyay in codsiga kaliya ee astaanta lagu ansixiyay ay ahayd beddel xaashida la soo saaray
Isbeddel ka badan inta ku filan Apple Mana noqon doonto wax badan oo xumaan ah shirkadda u heellan inay ku siiso cunnooyin caafimaad leh iyo liistada dukaamaysiga dhijitaalka ah iyada oo loo marayo dalabka moobiilka. Waxaan u qaadaneynaa in heshiisku dhaqangali doono waxyar isla markaana Apple ka soo horjeedda arrinta Prepear la keydin doono, waxaan rajeyneynaa weligiis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple iyo Prepear Reach Heshiis ku saabsan Sumadda Calaamadaha Pear-Qaabaysan
Fikrad cusub oo ku saabsan sida muraayadaha Apple ee la kordhiyey / loo yaqaan 'virtual virtual' ay noqon karaan
Hadda oo ay Hyundai ka baxday sawirka, yaa ku dhiiran doona inuu dhisto Gaariga Apple?